သက်ဝေ: ကျွန်မ၏ ကမ္ဘာ
Posted by သက်ဝေ at 12:35 PM
မိုးငွေ့........ July 18, 2012 at 1:13 PM
အမသားလေးအကြောင်းကိုခုမှအစအဆုံးဖတ်ရတာ..။ ရေးထားတာကောင်းလိုက်တာ..။ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ အဖြူရောင်အတ္တတွေကိုလည်းမြင်နေရတယ်...။ သားကလေးရုပ်က အမေနဲ့တကယ်တူတာ ဟိုတခါ ဓါတ်ပုံကြည့်ဖူးတယ်လေ...။
I thought u have no children. :)
mstint July 18, 2012 at 2:59 PM
မသက်ရေ သားသမီးတွေ လိမ္မာရေးခြားရှိတယ်ဆိုတာ မိဘရဲ့ထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မှာလည်း အများကြီးမူတည်တယ်လို့ ယူဆတယ်။
အထူးသဖြင့်သားယောက်ျားလေးတွေဟာ အရွယ်ရောက်လာရင် အများအားဖြင့် အပေါင်းအသင်းကိုခုံမင်တတ်ကြတယ်။ စာရေးကောင်းတယ်။
Nyi Linn Thit July 18, 2012 at 3:22 PM
ချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တဲ့ အက်ဆေးလေး...၊ ပထမတော့ နေ့လယ် ထမင်းစားချိန်မှ ပြန်လာဖတ်မလို့ပဲ၊ အစတစ်ကြောင်း၊ နှစ်ကြောင်းလောက် ဖတ်ပါဦးမယ်လေ ဆိုပြီး သတိထားမိတော့ နောက်ဆုံးစာကြောင်း ရောက်နေပြီ၊ ကဲ.. မခက်ဘူးလား၊း)
မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာကို အပြည့်အဝ ခံစားရတယ်၊ တစ်ဦးတည်းသော သားကို ချစ်တတ်တဲ့ မိခင်တွေရဲ့အတ္တလေးတွေကလည်း လူသားဆန်မှုကို ပြတယ်၊ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ ဒီလို သားမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မိဘတွေ အနေနဲ့ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုခွဲ နီးပါးအတွင်းမှာ ဘယ်လို ပီတိမျိုးတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက် နေခဲ့မလဲဆိုတာ စာနာ၊ နားလည်ပြီး မုဒိတာ ပွားမိပါတယ်...။
sonata-cantata July 18, 2012 at 3:42 PM
ရေချမ်းနဲ့ ရေစင်ကတော့ မိဘနဲ့ တူတာတွေလည်းရှိ၊ မတူတာတွေလည်းရှိ...
မိဘတိုင်းက သားသမီးတွေအပေါ် မျှော်လင့်သလို တို့များလည်း မျှော်လင့်လျက်ပဲ...မျှော်လင့်လျက်ပါပဲ...။
ချော (အစိမ်းရောင်လင်ပြင်) July 18, 2012 at 7:50 PM
မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာကို ချစ်ဖို့ကောင်းအောင်ကို ရေးတတ်တယ်။
ချစ်ကြည်အေး July 18, 2012 at 8:16 PM
ဖိုးတုတ် July 18, 2012 at 9:35 PM
ကိုယ်လဲ သားတစ်ယောက်ရှိတာ့ ဖတ်ရတာ တကယ်ဆွဲဆောင်မူရှိတယ်၊ ကျွန်တော့်သားနဲ.ရွယ်တူလောက်ရှိမယ်ထင်တာ အမသားရဲ့က အသက်တစ်နှစ်ပိုကြီးတယ်၊
ကျွန်တော်သားကလဲ ကျွန်တော်နဲ.သိပ်မချစ်ဖူးထင်လို. ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ကို ငြီးခဲ့ဖူးတယ်၊ ကျွန်တော်အထင်က သားက အမေကိုချစ်တယ်၊ သမီးက အဖေကိုချစ်တယ်လို.ထင်မိတယ်၊ ကျွန်တော်ဆရာက သားတစ်ယောက်၊ သမီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်၊ သူ.အပြောရ ၀မ်းထဲမှာ ကိုးလလွယ်တဲ့ အမေနဲ.တော့ ခင်တွယ်တဲ့ သံယောဇဉ်က နှိုင်းယှဉ်လို.မရဖူးလို.ပြောပါတယ်၊ ဆရာရဲ့အပြောအရ သူ.ရဲ့ သားရော၊ သမီးပါ အမေကိုပဲ ပိုခင်တွယ်တယ်လို.ပြောပါတယ်၊
Kay July 18, 2012 at 10:12 PM
ဖေဖေ့ လိုပဲ.. မိန်းမ ချောချော မြင့်မြင့် ချစ်ရှာလေး ရ မှာ သေချာနေပြီ..ဒါဆို..း)
ခင်မင်းဇော် July 18, 2012 at 10:49 PM
ညီရဲ July 19, 2012 at 1:39 AM
ရေးထားတာလေး ကောင်းလိုက်တာ... မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်လိုက်ရအောင်ကို အရေးအသားက ဆွဲခေါ်သွားတယ်...
mirror July 19, 2012 at 9:05 AM
း) ညီမတို့အဖြေရှာမရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ နားစွင့်နေရင်း .. အချိန်အတော်ကြာထိ ဒီမှာလည်း လုံးချာလည် လိုက်နေတော့ .. သူကလေးက ထလာပြီး ရှင်းပြသေးတာ။ :)
စုချစ် July 19, 2012 at 9:32 AM
သားက ၁၄နှစ်သာဆိုတာ အရပ်ကြီးက အရှည်ကြီး... တကယ့်လူပျိုကြီးပဲနော်... အစ်မသက်ဝေနဲ့တူလို့ ချောတာ...
ဟီး.. အစ်ကိုကြီး မသိစေနဲ့...
Thandar Lwin July 19, 2012 at 11:03 AM
၁၄ နှစ်သားလေး အဖေ အမေ ထက်တောင် အရပ်ရှည်သွားပြီလား ။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ပိုက်ဆံ စုတတ်တဲ့ သားလေး ခလုတ်မထိ ဆူးမငြိ ဘဲ ပျော်ရွှင် ကျန်းမာ ချမ်းသာ သော ဘ၀ ကို ပိုငဆိုင်ပါစေသော်ဝ် ။
မိုးခါး July 19, 2012 at 12:14 PM
ကြည်နူးစရာလေး .. ဖတ်လို့ အရမ်းကောင်းတာပဲ .. များများရေးပါဗျို့ :D
Nwai La July 19, 2012 at 3:32 PM
ဖတ်ဖို့ save လုပ်သွားတယ် အစ်မရေ
နွေးနေခြည် July 19, 2012 at 4:20 PM
ကြည်နူးစရာမိသားစုလေး ... ဖတ်လို့ကောင်းလို့ ပြီးသွားမှာတောင် စိုးရိမ်မိတယ်း)
Adora etc. July 20, 2012 at 9:49 AM
အမရေးထားတာကို ဖတ်ပြီး သိဖူးခဲ့တဲ့ အန်တီ တယောက်ကို သတိရမိတယ်။
Hmoo July 20, 2012 at 10:03 AM
ပန်းချီ July 21, 2012 at 3:24 PM
ဒီပို့စ်ကို ဖဘကနေဖတ်ပြီးသွားပေမယ့် ခုမှမန့်ရတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်းမိခင်တစ်ယောက်မို့ အစ်မ ရေးထားတာလေး ရင်ဘတ်ထဲကိုတန်းရောက်တာပဲ။ နှစ်နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့သမီးကလေးကိုလည်း ကြည့်ရင်းနဲ့ အချစ်ပိုလာရလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင်ကြောက်မိတယ် မ ရယ်။
ဇွန်မိုးစက် July 22, 2012 at 1:52 PM
မမရဲ့ ကမ္ဘာကို ၀င်ကြည့်သွားတယ်။ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ကိုညီလင်းသစ်ပြောသွားသလို လူသားဆန်တဲ့ အတ္တကို လှလှပပလေး ရေးဖွဲ့သွားတာ သိပ်ကောင်းတာပဲ။း)
နှင်းနဲ့မာယာ July 22, 2012 at 2:58 PM
မမမှာ သားလူပျို တစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့...
ပျော်စရာ မိသားစုလေး အကြောင်းဖတ်ရတာ
sosegado July 23, 2012 at 2:45 PM
ပြီးလျှင် အနည်းငယ်ရိုက်သွင်းခြင်းကိုတော့ ခံရပါမည်၊
အဆိုးနှင့်အကောင်းတွင် အကောင်းများကို ရယူနိုင်ပါစေ၊
rose of sharon July 23, 2012 at 5:24 PM
ရွှေပြည်သူ (ShwePyiThu) July 26, 2012 at 12:53 AM
ဖတ်နေတုန်းမှာ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ မေတ္တာတွေက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အရေးအသားကနေ တသိမ့်သိမ့် ဖြာထွက်နေသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ တဝကြီး ဖတ်သွားပါတယ် အစ်မသက်ဝေ...
သိ င်္ဂါရ July 28, 2012 at 4:55 PM
မိခင်တစ်ယောက် ရဲ့ မေတ္တာတရား အကြောင်း ဖတ်ရတယ် ။ အမေ့ ကို သတိရတယ် ။ အမေတွေ အားလုံးက သားတွေ အပေါ်မှာ အဲလိုပဲ နဲ့ တူပါရဲ့ ...